u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele
u-Aiden Markram uthole ikhulu lakhe lesibili kwi-series njengoba ebeke isikhonkwana esihle ebekela ama-Standard Bank Proteas njengoba beqale uhambo lwabo lokunqoba i-Test series yokuqala ekhaya bedlala ne-Australia kusukela kuhlanganwa e-Bidvest Wanderers Stadium ngoLwesihlanu.
Umdlandla wama-Proteas, umiswe kancane njengoba i-Australia ilwile ukukhipha ama-wicket ka-Markram, u-Faf du Plessis no-AB de Villiers kuma-runs angu-52.
Umphumela kube ukuthi ama-Proteas afike ekupheleni kosuku kumdlalo wokugcina we-Sunfoil Test ku-313/6 okuveze ukuba ngaphambili kusashaya u-Temba Bavuma no-Quinton de Kock kusazolandela ikhono lika-Vernon Philander.
Emuva kokuthi u-Du Plessis anqobe i-toss, u-Markram uhambe indlela ebheke kwikhulu lakhe lesine – i-career best engama-runs angu-152 emabholeni angu-216, okubalwa khona o-four abangu-17 no-six owodwa. Useyingxenye yeqembu labadlali asebathola amakhulu amaningi kuno-50 futhi yena no-De Villiers (69 off 119 balls, 7 fours, 1 six) badlulile kuma-runs angu-400 kwi-series enegkho omunye ofike kuma-runs angu-300 kuze kube yimanje.
u-Markram une-average engu-63 kwi-series, i-average yomsebenzi ephakathi ko-50 futhi udinga ama-runs angu-34 ukufika kuma-runs angu-1000 awokuqala kumdlalo wakhe wesi-10.
Ama-Proteas ashaya phezulu ashaye kahle kuyona i-series kumdlalo wanamhlanje, bahlanganisa ama-runs adlulile ku-300 osukwini kanye nokuba nama-partnership amane kulawa ayisithupha adlulile ku-50 ebihamba phambili eyama-runs angu-105 ahlanganiswe u-Markram no-De Villiers nge-wicket yesithathu.
Ukulwa kwe-Australia bekuholwe u-Pat Cummins ophosa ngokungashintshashintshi futhi uyena eqenjini labo onama-wicket amaningi njengoba ekhiphe u-Markram no-Du Plessis emabholeni alandelanayo.
Uphinde wasekelwa umdlali omusha u-Chadd Sayers, othathe indawo yomdlali olimele u-Mitchell Starc okhiphe u-De Villiers ne-night watchman u-Kagiso Rabada emabholeni amathathu.
Manje ama-Proteas azobe ebheke u-Bavuma no-De Kock ukuthi babamise kahle futhi babadlulise kuma-runs angu-400 okumphumela omuhle we-innings yokuqala kulenkundla.
Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel Ubuhlakane bukaMorne kuhola ukunqoba okukhulu kwama-Proteas nokuba u-Morkel ufinyelela ku-300; uhlelela ama-Proteas ukuba ngaphambili i-CSA ihalalisela u-Morne Morkel ngokungena kwiqembu lo-300 u-Cummins uguqula izinto emuva kwekhulu lika-Elgar elinike Ukubuya kwa-Rabada ‘ukuphakamisa’ okukhulu kuma-Proteas – u-Gibson i-CSA yamukela uphumela wesicelo i-CSA iyaqhela kumamaski zika-SBW; iyaxolisa kwi-CA u-Rabada uwaqalisa kahle ama-Proteas nge-‘fifer’ yakhe yesishagalombili u-Du Plessis ufuna kukhulume ikhilikithi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas lamankontileka ka-2018/19